musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Kufara Kugara muSeychelles: Kuravira kweParadhiso!
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Ivo vane rombo rakanaka vaviri muParadhiso Seychelles
Tim naMarlien Gentges pavakakwira Qatar Airways kwemaawa gumi nemaviri kubva kuGerman, havana kuziva kuti vaizomhara muSeychelles nemusi weMuvhuro, Gumiguru 12, semushanyi ane rombo 11th, zvichiratidza chiitiko chakakosha kuIndia Ocean Island kuenda uye kutorwa sezvo huwandu hwevashanyi vegore hwakapfuura iwo we114,859.
Vaviri ava vaive nezvakawanda zvekugadzirira vasati vafamba nekuda kwe COVID-19 uye vaishushikana pavakamiswa kumhara muSeychelles.
Vakazoona kuti vakatorwa sevanoratidzira nhanho yakakosha yekuenda.
Nezuva ravo rekutanga paMahé, veDhipatimendi rezveKushanya vakagamuchira vaviri vacho parwendo rwekunopinda Mason's Travel's Anahita catamaran kwavakanakidzwa nezuva rakazara-rinonakidza.
Vanoda zvekufamba vari muma30s, Tim, mutambi wenhabvu ane hunyanzvi uye mupurisa, uye Marlien, mudzidzisi wepachikoro chesekondari, vanogara papurazi diki muDusseldorf kuGerman nezvipfuyo zvavo uye vanofarira kufamba pamwe chete.
Marlien anoda kufamba, nepo Tim anga asingafarire pakutanga sekushanda kwake uye timu yemitambo anga asina nguva yakawanda yekuenda kure nekumba. Nekudaro, mushure merwendo rwavo rwekutanga pamwechete kuenda kuCanada, akadanana nekufamba nemukadzi wake. Pamwe chete kana vega, vaviri ava vakashanyira nyika dzinoverengeka kupasi rese kusanganisira Croatia, France, Italy, Netherlands, Austria, Sweden, Ireland, Spain, Fiji, neSri Lanka. Seychelles ndiyo yekutanga chitsuwa kuenda kwavakave vari pamwechete sevaviri.
Marlien naTim, vakasangana pamutambo wenhabvu pavaive vachiri kuyaruka, vakaroora kuGerman musi wa6 Chikumi 2020, ndokutsanangura kuti vakasarudza sei kuenda. Mushure mekufamba kuenda kumakondinendi ese pamwechete kusara kweAfrica, vaviri ava vaida kuenda kuchando munyika iri muAfrica; ndipo pavakawana uye vakasarudza Seychelles. Vakanga vafunga kuuya muna 2020 mushure memuchato wavo asi nekuda kwe COVID-19 marambidzo ekufamba vaifanira kuisa hurongwa hwavo hwekufamba.
"Tange tichironga kuuya kuSychelles tichangoroora asi nekuda kwe COVID izvi hazvaigona, saka takaronga kuenda ku2021 kana 2022," Marlien akadaro achiratidza kuti pavaironga kuenda kumuchato aida kuuya kuSeychelles, uye Tim anga asina chokwadi, asi pakusvika kwavo, vese vari pamusoro pemwedzi kuti yaive sarudzo chaiyo.
"Isu tinofara kuti takauya patakauya nekuti zvakatiwana kuti tive vaviri vane rombo rakanaka rekucherechedza nhanho muSeychelles," akadaro Marlien.
Vakanga vaine zvakawanda zvekugadzirira vasati vafamba nekuda kwe COVID-19 uye vaishushikana pavakamiswa kumhara muSeychelles, vachingoziva kuti vaizotorwa sevanoratidzira danho rakakosha rekuenda.
“Hatina kukwanisa kutenda kuti takanga tiri nhamba yerombo rakanaka, kwaive kupenga. Yaive inogamuchirwa uye ine hushamwari. Wese munhu akatiudza kuti vanhu vemuSeychelles vane hushamwari uye tinobvumirana, ”Marlien naTim vakadaro vachifara.
Vaviri ava vaive muSeychelles kwemazuva masere vakati ivo vaitarisira kuona zviwi zvakawanda sezvinobvira uye nekunakirwa chikafu checreole.
Nezuva ravo rekutanga paMahé, veDhipatimendi rezveKushanya vakagamuchira vaviri vacho parwendo rwekunopinda Mason's Travel's Anahita catamaran kwavakanakidzwa nezuva rakazara-rinonakidza vachiongorora zvishamiso zveSeychelles mvura yeSte. Anne Marine Park.
Kubudikidza negirazi rinoonekera rengarava inonyudza-inonyudza, vakafarira maziso avo pane hove dzakawanda dzinopisa, zvisikwa zvinogara mumapaki ane mavara epaki. Izvi zvakateverwa nekushambira mukati memvura inodziya ye-turquoise, ichipa hove dzakasvika padyo apo dzaihwinyira mupaki yegungwa.
Tim naMarlien vakanyanya kunakidzwa nechikafu chavo chemasikati uye varaidzo yemimhanzi neboka reMason's Travel vasati vaenda kumahombekombe kuti vaongorore Moyenne Island nemiti yayo inoshamisa nemhuka. Marlien akafara kwazvo kugona kuona nekusangana neGiant Torto dzinofamba-famba munzvimbo iyi zvakasununguka pamwe nemwana mucheche. “Ndinogona kunangana nekamba hombe kubva pandazonyora pazororo; Ndiri kufara kwazvo, ”akadaro.
Vaviri ava vakanyatsoshandisa kugara kwavo, kayaking uye snorkeling, pamwe nekushambira mudziva rine dombo paBliss Hotel Glacis uye kushanyira La Digue Island kwavakange vakatarisira kuchovha bhasikoro kutenderedza chitsuwa.
Marlien naTim vanoti kudzoka kuri mumakadhi, uye vangangoda kudzokera kuSeychelles, neshamwari kana mhuri.